MX Linux 19: DEBIAN 10 ကိုအခြေခံသောဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် «MX Linux» ဘလော့ (ယခင်ပို့စ်များကိုကြည့်ပါ) ။ ထိုအရာများသည်ယနေ့ပင်ဖြစ်သည်ကိုထင်ရှားသည် ဖြစ်၍၊ ပေါ်တယ်အတွက်ပထမနေရာ DistroWatch။ ဒါပေမဲ့၊ ဒါကိုသတိရကြစို့ «MX Linux» တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၎င်းသည် developer များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏သုံးစွဲသူများအကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ AntiX y MEPIS.
«MX Linux» ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရပ်ရွာလူထုဟာသူတို့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကိရိယာတွေနဲ့စွမ်းရည်ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့လို့ပါ un GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း အလင်းပေမယ့်ကြံ့ခိုင်, တစ် ဦး ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့၏အယူအဆအောက်မှာဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်တို့ပါ ၀ င်သောကြံ့ခိုင်။ အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် desktop။ ဒါတွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့၊ အသုံးပြုဖို့နဲ့ဖြန့်ကျက်ဖို့အတွက် ISO ပုံသဏ္sizeာန်သေးတယ်။
ဒီလှပပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း DistroWatch အရမူလအစရှိသည် ဂရိနှင့်မြောက်အမေရိက (ဂရိ / အမေရိကန်)သို့သော်အတိုကောက်အားဖြင့် «MX» များသောအားဖြင့်၎င်းသည်မက္ကဆီကိုမှဆင်းသက်လာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဤအက္ခရာ ၂ လုံး၏အဓိပ္ပာယ်သည်လုပ်ဆောင်ချက်မှလာသည် MEPIS ၏ပထမဆုံးစာကို AntiX နောက်ဆုံးစာနှင့်ပေါင်းစပ်ပါထို့ကြောင့်၎င်း၏တည်ထောင်သူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံဆောင်သည်။
ဤသည်ကိုလည်းဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည် site တွင်ပါဝင်သည် DistroWatchတစ်ဗားရှင်းအဖြစ် antixဒါပေမယ့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အောက်မှာ စာမျက်နှာ ၏လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူသီးခြားဖြန့်ဖြူးအဖြစ် MX Linux 16 ပထမဆုံးပြည်သူ့ Beta၊ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆။ ဒီနေ့ထိတိုင်စီမံကိန်းမှာရှိနေပါပြီ «versión 19» ခေါ်ဆိုခ «Patito Feo», အရာကျွန်တော်ခေတ္တအကြာတွင်ဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင် «MX Linux» မင်းဆီကိုသွားနိုင်တယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့်ရရှိနိုင်သည့်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်ပါ က ISO download လုပ်ပါ.
1 MX Linux 19: Ugly Duckling
1.1 ပြင်ပ application update များကို
1.2 မွမ်းမံမှုများကိုယ်ပိုင် MX applications များ
1.3 AntiX ကိုယ်ပိုင် application အသစ်
MX Linux 19: Ugly Duckling
၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အရသိရသည် «MX Linux»ဟုတ်တယ် «versión 19» o «Patito Feo» ၎င်းတွင်အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အစီအစဉ်များရှိသည်။
ပြင်ပ application update များကို
သိုလှောင်ရုံများ: DEBIAN 10.1 (Buster)၊ AntiX နှင့် MX Linux အတွက်ပါ ၀ င်သည်။
Desktop ပတ်ဝန်းကျင်: Xfce 4.14
Imagen အယ်ဒီတာ: GIMP 2.10.12
ဗွီဒီယိုစာကြည့်တိုက်များ ဇယား 18.3.6
Kernel: 4.19 ဗားရှင်း
Browser: Firefox ကို 69
ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်: VLC က 3.0.8
တေးဂီတမန်နေဂျာ (ပလေယာ): ကလီမန်တိုင်း ၁.၃.၁
အီးမေးလ်ဂလိုင်း Thunderbird ကို 60.9.0
ရုံးသုံး: LibreOffice 6.1.5 (သူတို့၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူ)
အခြားအက်ပ်များ ရရှိနိုင်သော DEBIAN နှင့် MX Linux သိုလှောင်ရုံများမှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
မွမ်းမံမှုများကိုယ်ပိုင် MX applications များ
Installer: Gazelle Installer (Gazelle) ကို အခြေခံ၍ automounting နှင့် partitioning လုပ်ငန်းစဉ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သက်ဆိုင်သောပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နေ့စွဲနှင့်အချိန်: System clock ပေါ်ရှိအလုပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသောပြောင်းလဲမှုများ။
USB format: USB သိုလှောင်ရေးကိရိယာချခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစီမံရန်အတွက်လျှောက်လွှာ။
Package Installer: ယခု Flatpak application များအတွက် version နံပါတ်များကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် LibreOffice မွမ်းမံချက်များကို DEBIAN ၏ Backports Repositories မှရရှိနိုင်သည်။
သတိပေးချက်များ System အသုံးပြုသူများထံသို့အရေးပေါ်စာများပေးပို့ရန် Package ။
မွမ်းမံသူ - ၎င်းသည်ဆိုင်းငံ့ထားသောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုစစ်ဆေးရန်အုပ်ချုပ်သူစကားဝှက်မလိုအပ်တော့ဘဲ၎င်းတို့အားဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ခံပုံများ - အသစ်သောရှယ်ယာပါဝင်သည်။
Bash စီစဉ်သူ (Bash-config) application အသစ်သည် bash ပတ် ၀ န်းကျင်၏အမြင်အာရုံတင်ပြမှုနှင့် aliases များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Boot-repair: အများဆုံးကွဲပြားခြားနားမှတ်တမ်းတင်ထားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေများ (မှန်ကန်သော) ကိုထောကျပံ့ဖို့ updated ။
Desktop themes: ကိုယ်ပိုင် themes အသစ်များပါဝင်သည်။
ပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုး ကျန်ရှိသော MX Linux ၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများမှအသေးစားအဆင့်မြှင့်မှုများ၊ အထောက်အကူပြုဖိုင်အများစုကို ISO ပုံရိပ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဘာသာပြန်များပါသည့် FAQ ရွေးချယ်မှု
AntiX ကိုယ်ပိုင် application အသစ်
အချို့ဗွီဒီယိုဆက်တင်များအပါအ ၀ င် Live AntiX စနစ်မွမ်းမံမှုများ။
သတင်းအချက်အလက်စာသား -based startup boot ပါဝင်သည်။
Live boot menu ရှိ“ safe” ဗီဒီယိုစတင်ခြင်းအဆင့်တွင်ပြင်ဆင်သည်။
ဒေသတွင်းထောက်ခံမှုတိုးတက်မှုများ - MX ၏လုပ်ငန်းသုံး application အားလုံးနီးပါးသည်ဘာသာပြန်အသစ်များပါဝင်သည်။
ငါတို့မြင်နိုင်ပါတယ် «MX Linux» သည် User Community အတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာကိုပေးသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါပါ «versión 19» ခေါ်ဆိုခ «Patito Feo»၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းမှကြီးမားသောခုန်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ဒေဗန် ၁၀ အပြောင်းအလဲများနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများ၏ရှည်လျားသောလမ်းအဘို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့သုံးတာသုံးချင်တယ် «MX Linux»ဤအုပ်စုများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ကွေးနနျးစာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေကိုသူတို့မျှဝေနိုင်အောင်သူတို့အကြောင်းကိုပြောပြပါ။ စပိန်ဘာသာဖြင့် MX, MX Linux & AntiX စပိန်ဘာသာ y Tic Tac စီမံကိန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » MX Linux 19: DEBIAN 10 ကိုအခြေခံထားတဲ့ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိလိုက်တယ်
Ubuntu Touch OTA-11 သည်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိကီးဘုတ်နှင့်အခြားအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်